Ambohipo : nilatsaka tampoka nandrava « revy » ny polisim-pirenena (NewsMada) | AEMW
Ambohipo : nilatsaka tampoka nandrava « revy » ny polisim-pirenena (NewsMada)
Ny zoma alina lasa teo, nanomboka tamin’ny 9 ora alina, nanatanteraka fidinana ifotony ny ao amin’ny kaomisaria boriborintany faharoa Ambohijatovo mikasika ny fandriampahalemana.
Fisafoana tampoka ny eny amin’ny faritry ny boriborintany faharoa iny indrindra ny eny Ambohipo nataon’ireo polisy marobe. Nampiharina avy hatrany kosa ny lalàna tamin’ny fanakatonana ireo fivarotana zava-pisotro sy ireo efitrano filanonana izay tokony hifarana amin’ny 9 ora alina. Teo ihany koa ny fanidiana ireo izay tsy nahazo alalana manokana ny amin’izany. Anisan’ny toerana mafana amin’ny korontana, ary matetika hisian’ny tabataba, fivorivorian’ny olon-dratsy sy ny sisa ny eny an-toerana. Mba hisian’ny filaminana hatrany amin’iny toerana iny ity nanaovana ity hetsika ity avy hatrany.
“Hiarovana sy fitaizana ihany koa ireo zaza tsy ampy taona izay mitady hirona amin’ny fitondratena ratsy”, hoy ny fanazavana. Hisorohana ny fanakorontanana ateraky ny fisokafan’ireo trano fisotroana ankoatra ny fotoana voatondro, toy ny loto sy ny fikonokononana ireo karazana asa ratsy maro mety hiseho.
Ny fidinan’ny tomponandraikitra voalohany amin’ny hetsika manokana toy izao, ho fampatsiahivana sy fanajana ny didy aman-dalàna no antony.
Olona 58 nohenoina
Tao anatin’ny tapa-bolana, olona 58 no nentina nohenoina tao amin’ny kaomisaria boriborintany faharoa. 12 no efa any am-ponja izay mpanendaka amin’iny faritra iny ny ankamaroany. Misy ny ezaka manokana atao amin’ny fifehezana ny faritry ny boriborintany faharoa. Nisy avy hatrany ny fivoriana ny sabotsy teo, teny Ambohipo amin’ny fandefasana fiantsoana ireo mpivarotra toaka ao anatin’ny boriborintany faharoa. Hiarahan’ny distrika sy ny kaomisaria , hampatsiahivana azy ireo ny zavatra voararan’ny lalàna. Notarihin’ny lehiben’ny kaomisaria boriborintany faharoa, ny Commissaire de Police Rafalimanana Alain Adonis, niaraka tamin’ny lehiben’ny district tana II, Ramatoa Raharimanganindriana Verohanitra Tianamalalasoa, ny hetsika. Nahitana ny fandraisan’anjaran’ireo tomponandraikitra ifotony ao amin’ny fokontany sy ny vaomieran’ny fandriampahalemana eny an-toerana. Andrasana ny any amin’ny faritra hafa.
← Ambohimasina : nanara-maso tany an-toerana ny komity (NewsMada)
Andohatapenaka : tsy eken’ny mponina ny fandravana (NewsMada) →